Guddoonka Golaha Shacabka oo maanta ka qayb galay Shir Garsoorka looga hadlayo oo ka dhacay Muqdisho – Kalfadhi
Guddoonka Golaha Shacabka oo maanta ka qayb galay Shir Garsoorka looga hadlayo oo ka dhacay Muqdisho
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka furmay shir sanadle ah oo looga hadlayo Garsoorka Soomaaliya islamarkaana ay ka qayb galayn Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Golaha Shacabka ee BFS, Wasiirka Cadaaladda, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare iyo mas’uuliyiin kale, waxaana aad looga hadlay dhibaatooyinka uu wajahayo Garsoorka Soomaaliya.
Shirkaan ayaa sanadkiiba mar la qaban jiray waxaana sanadkaan diiradda lagu saarayaa soo noolaynta shirka sanad laha’ah iyo Caqabadaha hortaagan dib u habeynta Garsoorka Soomaaliya, dadka ka qayb galayaa ayaa dhiibanaya aragtiyo ku aadan sidii Soomaaliya Garsoorkeeda u soo kaban lahaa.
Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo ka hadlay Shirka ayaa sheegay in Soomaaliya ay wajahayso dhibaatooyin daran oo dhinaca Garsoorka, dhibka Soomaaiya ka jiro ayuu sheegay in ay sabab u tahay Garsoorka oo aan wanaagsaneen. Wasiirka waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyay hadii uu hagaago Garsoorka Soomaaliya ay hagaageyso Soomaaliya inteeda kale.
“Garsoorka waa Aas-aaska nolasha iyo horumarinta umad walba, hadii aan Garsoor jirin ama uusan hagaagsaneen umadaas nolal ma heestaan Soomaaliya waa sidaas” ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji “Waxaan u baahanahay in la cadeeyo nuuca Garsoorka aan qaadaneyno” ayuu yiri Xasan Xuseen Xaaji
“Way adagtahay in Garsoor sax ah laga helo Garsoore baahan oo aan amni iyo nolal midna heysan” ayuu hadalkiisa sii raaciyay Wasiirka Cadaaladda Soomaaliya.
Reysal Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahadi Maxamed Guuleed oo katiran madaxdii ka qayb gashay Shirkaan ayaa ku dheeraaday ka hadalka nidaamka Federaalka iyo Garsoorka Soomaaliya, waxa uu sheegay in Soomaaliya burburkii ka dhacay uu sababay in la qaadsiiyo waxyaabo badan oo aan ku haboonayn.
“Nidaamka Federaalka Soomaaliya waan ku wareernay, Soomaali waa isku mid isku dhaqan iyo diin ah, wax walba waan ka simanahay ma aqaan sababta aan u qaadanay Federaal” ayuu yiri Reyasl Wasaare ku xigeenka Soomaaliya.
“”Hadii aysan cadaalad jirin Nabad majirayso, hadii aysan nabad jirinna Nolol majirayso” ayuu yiri Mahdi Guuleed Reysal Wasaare ku xigeenka Soomaaliya.
Gudoomiyaha ku xigeenka Golaha Shacabka Mahad Cabdalla Cawad ayaa ka hadlay shir Sanadeedka Garsoorka Soomaaliya ayaa sheegay in Golaha Shacabka ay daadajiyeen Sharciga Adeega Garsoorka, waxaa kale uu sheegay in Soomaaliya aysan lahayn Gole qareenno oo sharci ah.
“Dalka kama jirto Gole qareenno oo sharci ah, waxaan codsanayaa in la sameeyo, waliba si deg deg ah, Waxaan dhiiri galinaynaa dhismaha Guddiga adeega Garsoor ee Madaxa-banaan si loo dhameeyo sanadkaan dhex diisa” ayuu yiri Mahad Cabdalla Cawa.
Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed ayaa ka hadlay Muhiimadda shirka Garsoorka ee Sanadlaha ah, waxa uu sheegay in shirkaan loogu tala galay in lagu gorfeeyo waxqabadka Garsoorka ee sanadkii dhamaaday iyo waxyabihii qabsoomay ama baaqday sidoo kalana lagu kala xog-qaato .
“Waxaan xoojiyay Garsoorka Soomaaliya is badal loogu sameeyay Garsoorka dalka ilaa heer Gobol, degmo ilaa min tuulo” ayuu yiri Guddoomiyaha Maxkamadda Sare ee Soomaaliya “waxaan soo kordhinay qalab casri ah oo Electronic ah, si toos ah ayaa madaxtooyada loola socdaa shaqada Maxkamadda” ayuu hadalkiisa raaciyay Baashe Yuusuf Axmed.
Soomaaliya ayaa wajaheyso dhibaatooyin badan oo Garsoorka ah waxayna arintaasi sababtay in dalka uu galo dhibaatooyin badan, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sanadkii 2017 sheegay in 100 cesho uu wax kaga qaban doono dhibaatooyinka ka jira Garsoorka Soomaaliya ilaa hadana Madaxweynaha uma suurta gelin in wax muuqda laga qabto Garsoorka Soomaaliya.
Milateriga Soomaaliya oo loo diiday in ay ilaaliyaan Xasan Sheekh oo Beladweyne ku sugan
Guddiyada Kheyraadka ee BFS iyo Xisbiyada Siyaasadda maxay ku arkeyn Shirka London?